Iqembu leBlack Rhinos Linqoba eleHighlanders Endlalweni wePSL
Nhlangula 14, 2017
Umqeqetshi weqembu leHighlanders, uErol Akbay.
Iqembu le Black Rhinos likhuphuke layahlala phezu kwengalane lilemiklomelo engamatshumi amabili lesithupha ngemva kokubhaxabula ele Highlanders nge 3 ka nya emdlalweni obusenkundleni ye Morris Depot ngoLwesine.
Abahlohlele iqembu leRhinos ngababalisa uLot Chiwunga yena olitshayele emambuleni kabili kanye lonozinti uHerbert Rusawo yena ohlohle umbekwa.
Emdlalweni obusedolobheni lako Bulawayo enkundleni yeLuveve iqembu le Chicken Inn linqobe ele ZPC Kariba nge 2 ka nya njalo abahlohlele leliqembu eliqeqetshwa nguRahman Gumbo ngu Guide Goddard kanye lo Innocent Mucheneka.
Iqembu le Chicken Inn lindize layahlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo njalo umlandeli walo omkhulu uMaCloud Moyo uthi sekulithuba labo elokujabula ngemva kokudonsa nzima ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka.
“Ngendawo ngendawo, ibhola selintshintsha imiklomelo emithathu iyasentshenzelwa. Sasingadlali kuhle kodwa manje sesikhuphule izinga ikanti labo ababedlala kuhle sebedlala kubi, ukujabula kuyantshintshwana vele.”
Emdlalweni obusenkundleni ye Ascot esedolobheni leGweru iqembu le Chapungu linqobe ele Bulawayo City nge 1 ka nya kuthi ele FC Platinum libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Harare City enkundleni ye Mandava Stadium edolobheni leZvishavane.
Enkundleni ye Gibbo iqembu le Triangle United litshaye ele Shabanie Mine nge 3 ka 1.
Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngoLwesine lapho iqembu le Bantu Rovers FC elizemukela khona ele Tsholotsho enkundleni ye Luveve ngehola lakuqala elemini kuthi ngehola lesithathu emini iqembu le How Mine lizangqikilana lele Yadah enkundleni efanayo.
Iqembu le Dynamos lizadlala lele Ngezi Platinum Stars enkundleni yeNational Sports Stadium ngehola lesikhombisa ntambama kuthi umdlalo obekumele ubephakathi kweqembu le Hwange lele Caps United udluliselwe phambili.